दशगजामा ह्वात्तै बढ्याे नेपालीको चाप - Deshko News Deshko News दशगजामा ह्वात्तै बढ्याे नेपालीको चाप - Deshko News
दशगजामा ह्वात्तै बढ्याे नेपालीको चाप
भारतमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै सीमा नाकामा नेपालीकाे संख्या ह्वात्तै बढकाे छ। नेपाल-भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा सोमबारसम्म ३ हजार ६५ जना नेपाली जम्मा भएको पाइएको छ । तीमध्ये २ हजार ३ सय ८५ जना विभिन्न प्रदेशका नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन् । अरु सीमा क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा राखिएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलले गृह मन्त्रालयका बुझाएको विवरणअनुसार सोमबार चार बजेसम्म नेपाली सीमा नाकामा २ हजार ३ सय ८५ जना रहेको देखिन्छ । यद्यपि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको जिल्लास्थित संयन्त्रसँगकाे सम्पर्कबाट भारतका क्वारेन्टाइनमा समेत गरी ३ हजार ६५ जना मजदुर सीमामा रहेको खुलेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले तत्काल नेपाल प्रवेश गर्ने उद्देश्यका साथ सीमामा आएका व्यक्तिको विवरण संकलन गरेको एक उच्च अधिकृत बताए । सशस्त्र प्रहरीले बुझाएको रिपोर्टअनुसार प्रदेश नं. २ को धनुषामा ५, सिरहामा १९, प्रदेश ५ को नवलपरासीमा ६०, रुपन्देहीमा १ सय ६१, कपिलवस्तुमा दुई हजार एक सय ३७ र प्रदेश नं. ७ को कञ्चनपुरमा ३ जना सीमामा अलपत्र छन्।
नेपाल प्रहरीको प्रदेश नं. ५ को कोभिड-१९ डेस्कका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) अवय झा भारतबाट नेपाली मजदुर आउने क्रम अझै जारी रहेको बताउँछन् ।
सीमामा अलपत्र नेपालीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कसँगै नजिकबाट नियालिरहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँगै प्रदेश सरकारले उद्दार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एक उच्च सुरक्षा अधिकृतले बताएअनुसार अझै नेपालीलाई सीमामा अड्काइ राख्ने हो भने धैर्यताको सीमा फुट्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सीमामा स्वास्थ्य जाँचपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी अलपत्र नेपालीलाई ल्याउन सक्नेबारे छलफल जारी छ । तर, सोमबार एकैदिन २४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएर कुल संक्रमितको संख्या एक सय ३३४ पुगेको छ । तीमध्ये कपिलवस्तुमा भेटिएका १० संक्रमित लकडाउनकै वेला भारतबाट आएको पाइएकाले मजदुरलाई नेपाल ल्याउनु जोखिम पनि हुनसक्ने विश्लेषण गरिन थालेका छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद वैठकले २४ वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमा नाका जेठ १८ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।